The Sony DPTS1 na-enweta mmelite ọhụrụ | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Sony?, Melite gị 13.3-anụ ọhịa eReader ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ DPTS1
O doro anya na ọtụtụ ndị ga-ada ụda dị iche ịhụ na aha ntinye a okwu eReader na Sony, mana nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ Japan ka na-arụ ma na-ere ngwaọrụ nke ụdị a na Japan. Na mgbakwunye, nnukwu eReader ya na ihuenyo 13,3-inch, mara aha ya DPTS 1, ka na-ere n'èzí ala ya ma nwee ike zụta dịka ọmụmaatụ na United States.
Kpamkpam ngwaọrụ a, nke dọtara uche anyị nke ukwuu ruo ụbọchị ya, nke anyị ka masịrị ọtụtụ, emelitere ya na mbipute ọhụrụ nke ngwanrọ na-etinye ndozi ọhụrụ na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ niile kpebiri imefu nnukwu ego euro na eReader a.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị nwere ihu ọma inwe otu n'ime akwụkwọ elektrọnik ndị a, anyị ga-ebu ụzọ gwa gị na mmelite ahụ dị maka ngwaọrụ ndị a na-ere na Japan, yabụ ọ bụrụ na ị zụrụ ha na United States ma ọ bụ obodo ọzọ na oge ị gaghị enwe ike ịnweta nhọrọ na ọrụ ọhụụ.
Otú ọ dị, ị gaghị ewe iwe na Sony na nke ahụ bụ na otu n'ime ndozi ndị dị mkpa na ngwaọrụ a, nke bụ ohere ịnweta nkwado maka usoro ndị ọzọ, abịaghị na ngwanrọ ọhụrụ a ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ na dọkụmentị na usoro PDF ma ọ bụ EPUB.
Lee, anyị gosiri gị ọrụ ọhụrụ na nhọrọ anyị nwere ike ịchọta na nke a 13,3-anụ ọhịa Sony eReader:
Ohere enwere ike ide ihe na onyonyo ebuwanye ibu
Agbakwunyere ndebiri ndebiri ọhụụ
Site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye ma ọ bụ hichapụ ibe site na akwụkwọ PDF
E tinyela ọrụ nhicha / redo
Ike itinye ma ọ bụ hichapụ nchekwa
Enweghi otutu ọrụ na nhọrọ etinyere, mana ọ bụrụ na ha niile dị ezigbo mkpa ma n'ezie ndị ọrụ niile nabatara ha nke ọma.
Iji mechie edemede a, enweghị m ike ịhapụ ohere ịkatọ Sony na ndị isi ya niile kpebiri na ha agaghị ere ngwaọrụ a n'ụwa niile, ọ bụkwa na nnukwu ihuenyo ahụ ọ ga-abụ ezigbo nkwado maka ọtụtụ, gụnyere onwe m.
Ọ bụ otu ihe ịkwụsị ịkwụsị eRead n'ihi na ọ baghị uru maka gị, mana eReader a pụrụ iche ma echere m na ọ ga-ere ahịa n'ụwa niile dịka ọ ga-aga nke ọma na enweghị mgbagha.
You ga-azụta eReader dị ka nke a site na Sony nwere ihu ngosi anụ ọhịa 13,3?.
Isi mmalite - sony.jp/digital-paper/support
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Sony?, Melite gị 13.3-anụ ọhịa eReader ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ DPTS1
Na-aza ajụjụ ikpeazụ gị: ee ... ọ bụrụ na ọ ga-efu € 200 ma ọ bụ € 250, ka ukwuu. Na ego nke $ 1000 Agaghị m azụta ya dị ka egwuregwu.
Ọ dị ezigbo mma na anụ ahụ. Itinye 13,3 ″ n'ụdị dị gịrịgịrị na ọkụ dị ka ọ bụụrụ m aghụghọ, mana anyị enweghị ike ileghara anya na ọ bụ naanị akwụkwọ ndetu. Dijitalụ akwụkwọ ndetu ee ... ma akwụkwọ ndetu mgbe niile. Mmadu onwere ike i kwuta € 1000 (ma obu € 740 ka anyi gaa) maka akwukwo, nagbanyeghi otu teknụzụ ya si bụrụ chachi? Ọ bụghị.
Emezighị emezi ndị ọzọ o nwere bụ na ọ na - agụ naanị .PDF. Ọ dịghị ihe ọzọ. N’ikpeazu, ọ na-anabata peeji iri ji aka aka ederede kwa akwụkwọ ọbụla, agbanyeghị na Sony kwere nkwa idozi nke abụọ.
Ọ bụrụ na a na ngwaọrụ nabatara ọzọ formats, nwere a na agba ihuenyo ga-zuru okè na a "nkịtị" price ga-zuru okè. Anyị ga-ekwu maka nnọchi maka akwụkwọ ederede mana ọ dị nwute na ink agba ka dị ka ebe dị anya ma ọnụahịa nke Sony tinyegoro na ngwa a na - eme ka ọ bụrụ egwuregwu dị oke ọnụ maka naanị gourmets
Otu esi agbanwe pdf faịlụ ka epub na Caliber
Amazon na-enye chegharịrị echegharị ma kwadobere Kindle Touch naanị euro 59